Nnukwu ụlọ ọrụ ọchụchọ ụgbọ elu - ụgbọ elu gị na nke kacha mma
Flightsgbọ elu dị ala
Chọta ụgbọ elu kacha mma na ọnụahịa kacha mma Ọ ga-ekwe omume maka nchọta ụgbọ elu na ihu akwụkwọ njegharị dị na Ntanetị na ọtụtụ ndị njem na-echekwa ma na-eme njem na obere ego.
Iji igwe na-esote nchọta ụgbọ elu ị ga-enwe ike ịchọta ma zụta tiketi ụgbọ elu gị na ọnụahịa kachasị mma yana nkwa niile. Ọ bụ azịza kachasị mfe ma dịkwa mfe nke anyị na-akwado site n’aka Absolut Viajes.
Mana ọ bụghị naanị nhọrọ a, enwere ọtụtụ weebụsaịtị ndị ọzọ na net. Kedu ihe kacha mma? Ọfọn, dịka ndị njem ọ bụla nwere ibe ha kachasị amasị ha, lee, anyị ga-eweta ndị kachasị amasị anyị:
Rumbo: ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem ntanetị a ma ama na-enye gị usoro ụgbọ elu ya niile na ọnụahịa kacha mma na ịpị ebe a.
eDreams: Otu n'ime ụlọ ọrụ njem kachasị ukwuu n'ụwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ụgbọ elu dị ọnụ ala pịa ebe a.
Ọkachamara Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ọchụchọ ụgbọ elu ndị kachasị ewu ewu na ụwa. Tụlee n'etiti ọtụtụ puku nhọrọ ma chọpụta ụgbọ elu ị na-achọ na ọnụ ala dị ọnụ ala na ịpị ebe a.
Jide ya: Can nwere ike ịchọta ma tulee ọtụtụ puku ụgbọ elu maka usoro ọchụchọ a. Itinye na akwụkwọ na kasị mma price pịa ebe a
Liligo: Na Liligo anyị nwere ike ịchọta ihe niile ịchọrọ iji dozie ụgbọ elu dị ọnụ ala na nkwa niile. Pịa ebe a
Ikpeazụ na-enye gị ọtụtụ ụgbọ elu. Banye ebe a ma jiri ọnụ ahịa niile tụnyere ụgbọ elu ị na-achọ.
Njem ụgbọ elu
Otu n’ime ụgbọ njem kacha dịrị nchebe na nke kachasị ọsọ bụ ụgbọ elu. Ekele dịrị ya, anyị nwere ike ịmalite ịhazi njem ọzọ anyị. Ebe njedebe nwere ike ịdị iche dị ka iche echiche anyị na-enye anyị ohere. N'ezie, nke mbụ, ọ kachasị mma ịmalite ebe anyị kwesịrị ime ya: ile anya ụgbọ ala dị ala.
Ọ bụrụ na ọ dịlarị, na ezumike anyị ga-ahapụ nnukwu mmefu ego, ọ bụghị mgbe niile ka ọ dabere na ụgbọ elu. Taa enwere ọtụtụ elele na ego, ebe ị ga - enweta ụfọdụ ọnụ ala ụgbọ elu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'echeghị echiche.
1 Nnukwu ụgbọ elu ụgbọ elu ọchụchọ
2 Njem ụgbọ elu
3 Uru nke ntinye akwụkwọ ụgbọ elu n'ịntanetị
4 Chọta ụgbọ elu dị ọnụ ala na ebe ị chọrọ
5 Etu esi achọta ụgbọ elu ọnụ ala
6 Isi aga njem site na ụgbọ elu
6.1 Nnukwu ụgbọ elu na London
6.2 Nnukwu ụgbọ elu na Madrid
6.3 Costgbọ elu dị ọnụ ala na Barcelona
6.4 Nnukwu ụgbọ elu na Paris
6.5 Otu esi efe ụgbọ elu na Rome
Uru nke ntinye akwụkwọ ụgbọ elu n'ịntanetị
Otu n'ime echiche kachasị mma mgbe a bịara akwụkwọ ụgbọ elu na ntanetị, bụ ime ya nke ọma, na-enweghị enyemaka onye ọ bụla. Anyị ga-arara ya oge dị ukwuu, mana maka na anyị kwesịrị ịtụle ma gụọ ozi niile nke ịntanetị na-enye anyị.
Chọọ n'ụzọ zuru ezu: Nke mbụ, anyị ga-ejide ezigbo igwe nchọ, dịka nke anyị na-enye gị. Ọ dịghị mkpa ihe dị mgbagwoju anya, mana ịmara na anyị ga-enweta kpọmkwem ihe anyị na-achọ. Ihe dị mfe na ngwa ngwa nke na-eme ka ọrụ anyị dị mfe. A ezigbo injin nchọ ọ ga-enwe igbe ga-ejupụta na mbido ya ruo ebe a na-aga. N'otu aka ahụ, ọpụpụ na nloghachi dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma na njem anyị. N'ihe gbasara sekọnd, anyị ga-enweta ụgbọ elu dị ọnụ ala nke ka nwere oche.
Mgbidi: Obi abụọ adịghị ya, onyinye bụkwa usoro nke ụbọchị. Yabụ, ọ naghị afụ ụfụ ile anya na webụsaịtị dị iche iche iji nwee ike iji ọnụ ahịa kacha mma atụle ya. Jide n'aka na n'ime ha niile, ebubo ikpeazụ ka akọwapụtara nke ọma, nke a ga-egosipụta na ọnụahịa ahụ. Ekwela ka onyinye buru ibu buru gị, na-agụghị ezigbo mbipụta nke ọma.
Udo nke obi na nkasi obi: N'ezie anyi g'eme ulo a nile. A izu ụka, mgbe anyị nwere oge, nwere ike ịbụ ezigbo oge. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike ịnyagharịa n'ụzọ dị jụụ, na-atụle ụdị ụgbọ elu niile yana onyinye enyere anyi. O doro anya na ịpị aka ole na ole ị ga - enweta ihe niile ịchọrọ maka njem a na - agaghị echefu echefu.
Chọta ụgbọ elu dị ọnụ ala na ebe ị chọrọ
Dị ka anyị kwuru na mbụ, nke mbụ niile bụ iche maka ebe anyị chọrọ ịga. Ugbu a anyị nwere ahụla ya anya, kedụ ihe anyị ga-eme iji chọta ụgbọ elu dị ọnụ ala?
Mgbanwe: Obi abụọ adịghị ya, mgbanwe nke usoro iheomume bụ otu n’ime ngwa agha anyị kachasị mma iji nwee ike ịdị mma ụgbọ elu azụmahịa. Buru n'uche na ọnụahịa ga-ebili mgbe anyị họọrọ ebe ndị ama ama na njem nleta. N'otu aka ahụ, anyị niile mara mgbe oge elu dị na mmetụta ha ga-enwe na ọnụahịa. Site na igwe nchọgharị ụgbọ elu anyị, ịnwere ike ịchọpụta ebe ị na-echeghị n'echiche mana jiri nnukwu ọnụ ahịa. Wayzọ a ga-ebu pụọ ma chọpụta ebe pụrụ iche.
Zụrụ ụgbọ elu ahụ n'oge ka ọ bụ mbubreyo?: Enwere ezigbo obi abụọ na ajụjụ a. Ọ dịghị mfe ịza. Ọ ga-adabere n'ọtụtụ ihe, mana anyị nwere ike ikwu na ntinye akwụkwọ nke ọma tupu oge eruo ma na oge na-adịghị anya nwere ike ibute mmụba nke tiketi. Kedu ihe anyị ga - eme n'ọnọdụ ndị a?. Ọfọn, dị ka a na-achị n'ozuzu ya kwuru na n'oge mbụ, dee akwụkwọ ọnwa ole na ole gara aga. N'aka nke ọzọ, n'ikpeazụ, ihe dịka izu atọ ma ọ bụ anọ tupu ịmalite njem gị. Dabere na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ, ekwesiri na oge ziri ezi iji zụta ụgbọ elu dị ọnụ ala bụ ihe dị ka ụbọchị 55 tupu. Mgbe oge a gasịrị, ọnụego nwere ike ịrị elu ọzọ, yabụ na-amụ anya oge niile.
AjọỌ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịbụ nsogbu, ọ bụkwa ihe ọzọ na-akpata ịchọta ụgbọ ala dị ọnụ ala. Obi abụọ adịghị ya, enwere ebe chọrọ ha ma, ọ bụ ezie na ha na-atụgharị anyị gaa ebe ọzọ, ihe dị mkpa bụ nsonaazụ na ikpeazụ price. Perfectzọ zuru oke iji ga-efu na mpaghara ahụ nke anyị na-amaghị nke ga-enye anyị oge iji hụ tupu ịla ọzọ.
Etu esi achọta ụgbọ elu ọnụ ala
O doro anya Igwe nchọgharị ụgbọ elu bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mfe iji. Ikekwe n'ihi na ọ bụ naanị igbe ndị ahụ dị mkpa ka ọ dị nkenke na ọchụchọ anyị. Nke mbụ, ị ga-egosi mbido ya. Nwere ike ịhọrọ ụgbọelu kacha nso dị nso yana aha obodo gị. N'otu ụzọ ahụ, ị ​​ga-eme otu ihe ahụ kpọmkwem ebe ị na-aga. Ebe ahụ ka ị ga-anụ ụtọ ezumike gị kwesịrị ekwesị.
Ozugbo emejuputara nke a, anyị ga-aga lee ụbọchị ụgbọ elu anyị. A ga-egosipụta kalenda, yabụ na ị ga-ahọrọ ụbọchị akọwapụtara. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ a otu ụzọ ma ọ bụ njem gburugburu. Dị Mfe, nri? Ọ dị mma, naanị ị ga-pịa bọtịnụ ahụ, "Chọọ" na ọ bụ ya. N'oge a nhọrọ zuru ezu nke nhọrọ niile ga-apụta. Ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche na-enye gị ụgbọ elu kachasị mma na nnukwu ọnụahịa. Yabụ ị nwere ike iji tụnyere ma họrọ nke kachasị gị mma.
Isi aga njem site na ụgbọ elu
Nnukwu ụgbọ elu na London
Otu n'ime isi ebe bu London. Kwa afọ e nwere ọtụtụ ndị njem na-abịa mara isi obodo England. Yabụ, ịnwere ike ịchọta ụgbọ elu dị ọnụ ala gaa London mgbe ọ bụla ịchọrọ. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ha ma ọ bụ ya mere, site na igwe nyocha ị nwere ike iji ụgbọ elu niile tụnyere, yana usoro ha na ọnụego ha. N'ime ndị a kacha mara amara bụ Vueling, Ryanair ma ọ bụ Air Europa. Na mgbakwunye, ị nwere ọpụpụ site na ọdụ ụgbọ elu na ọtụtụ awa n'ụbọchị. Have nweghị ihe ngọpụ ga-ekwe omume ịghara ịga!
Nnukwu ụgbọ elu na Madrid
N'otu aka ahụ, a na-eleta isi obodo Spain ọtụtụ ugboro. Gbọ njem na Madrid na-adịkarị ọnụ ala na-ahapụ ihe mbụ n'ụtụtụ. Na mgbakwunye, ụbọchị izu ga-abụkwa ihe dị mkpa iji nwee ike ịhụ mbelata na ọnụahịa ikpeazụ. Naanị ihe karịrị otu awa ị ga-anọ ebe njedebe gị.
Costgbọ elu dị ọnụ ala na Barcelona
Na Barcelona anyị ga-ezute ọdụ ụgbọ elu El Prat. Ọ bụ nke abụọ kachasị na Spain, yabụ ụgbọ elu na ndị njem na-eleta ya kwa ụbọchị enweghị atụ. Ọ nwere mpaghara atọ na-apụ apụ yana ebe ọdịda. O nwere ọtụtụ mba yana ụlọ ọrụ mba ofesi, yabụ ọ ga-adị mfe na-ahụ ụgbọ elu dị ọnụ ala mgbe niile.
Nnukwu ụgbọ elu na Paris
para gbaga parisAnyị nwere ụlọ ọrụ dị iche iche dịka Iberia, Air Europa, British Airway ma ọ bụ Vueling, n'etiti ndị ọzọ. Ọ ga-adabere mgbe niile na njedebe na ebe mbata. Paris nwere ọdụ ụgbọ elu atọ. Charles de Gaulle, Orly na Beauvais. Ha niile jikọtara nke ọma na etiti ahụ.
Otu esi efe ụgbọ elu na Rome
Ọ bụrụ na ịchọrọ gbagoo na romeIkwesiri ima na o nwere ugbo elu ugbo elu abuo. Nke a bụ n'ihi na ahịa ndị ọbịa gị na-agbakwunye kwa afọ. Offọdụ ụlọ ọrụ dị ọnụ ala na-abata bụ Vueling, Ryanair ma ọ bụ Easyjet. N'ime ha, ị nwere ike ịchọta mgbe niile rịọ maka ihe na-erughị euro 30ọ bụrụhaala naanị iburu akpa aka. Barcelona, ​​Ibiza, Madrid ma ọ bụ Seville bụ ụfọdụ n'ime isi ihe iji nweta ụgbọ elu Rome.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ebe ị ga-eleta na ọtụtụ ọnụ ala dị ọnụ ala anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya. Naanị ị ga-ahọrọ ụbọchị wee malite ịnụ ụtọ ezumike gị kwesịrị ekwesị.